Hong Kong: Ny Fiafaran’ny Anganongano HSBC · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2018 8:31 GMT
Tsy nahatazona ny ranomasony tsy hilatsaka ilay mpilaza vaovao ara-toekarena aminà fahitalavitra mandeha amin'ny hosona rehefa nidina hatrany amin'ny 33$HK ny vidy nandritra ny fotoanan'ny lavanty tamin'ny minitra farany nialoha ny nikatonan'ny tsena. Niely be tamin'ny YouTube ilay lahatsary ary lasa lohahevitra mafàna amin'izao fotoana izao
Nahazo antso avy tany amin'ny A aho ny maraina, nolazainy fa ambany be ny vidin'ny petrabolan'ny HSBC, nefa mbola mijanona ho HK$38. Efa very sahady ny ampahatelon'ny fampiasambolany ao amin'ny HSBC amin'io haavo io, raha mbola milatsaka io, dia tsy azony antoka intsony ny fanànany ny zony.
Tsy nisy fiantraikany tamin'i Mimi ny krizy saingy nanamafy izy fa tokony handinika ny fampianaran'i Bouddha ny vahoakan'i Hong Kong:
ranonando na tselatra iray fomba iray, izay làlana tokony ho raisin'ny lehilahy mahira-tsaina. ( nadika avy tamin'ny zftrans )